TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန RayHaber | raillynews
← Back ကိုအဖွဲ့စာမျက်နှာ
+ Google Maps ကို
တူရကီ, Anafartalar Mah, Hipodrum Cad ။ No: 3, Altındağ 06340 Türkiye
အဆိုပါတူရကီပြည်နယ်မီးရထား TCDD သမ္မတနိုင်ငံ, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးတူရကီအတွက်ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးအုပ်ချုပ် operating နှင့်အစိုးရထိန်းချုပ်ထားသည်။
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု 444 8 233
ဝန်ထမ်းများ: 35.593 (Tulomsas, Tuvasas နှင့် Tudemsas အပါအ ၀ င်)
အထွေထွေမန်နေဂျာ ရရှိနိုင်သောအလီ Ihsan
နေရပ်လိပ်စာ: Altındağခရိုင် Hippodrome Anafartalar Caddesi အဘယ်သူမျှမ:3တူရကီ - တူရကီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တူရကီပြည်နယ်မီးရထား3၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု, Cer ညွှန်ကြားမှုထရပ်ကားစုဆောင်းရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်
TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုနှင့် Erzincan တက္ကသိုလ်တို့အကြားအဝေးသင်ပညာရေးသဘောတူညီချက်…
ဆီ၏တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု (TCDD) ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး
ယနေ့သမိုင်းတွင် - စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ၁၅၃ နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုများအတွင်း TCDD …
Atlas Copco TCDD နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ Make သမ္မတရုံးကိုခပ်
တင်ဒါကြေငြာချက် - မြေတိုင်းနှင့်စီမံကိန်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း (TCDD Facility …)
Task ကိုမှ Assigned TCDD အိုမာကြယ်
ဂျော့ဘ်: TCDD ဟောင်းပြစ်မှုထင်ရှားခဲ Buy
ဝန်ထမ်းများအား ၀ န်ဆောင်မှုခံယူရမည် TC STATE RAILWAYS OPERATION General General DIRECTORATE (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှု။ ၀ န်ဆောင်မှုဝယ်ယူမှု TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအဆောက်အ ဦး တွင်အလုပ်ခန့်ရန်အလုပ်သမား ၂၃ ဦး နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
İhale İlanı : Krapo Blonu ve Somunu Alımı
TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Krapo Blonu ve Somunu Alımı Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler 1.1. İş sahibi idarenin; a) Adı :TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası b) Adresi…
İhale İlanı : UIC60 Makas İçin İrtibat Çubuğu Alımı
TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası UIC60 Makas İçin İrtibat Çubuğu Alımı Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler 1.1. İş sahibi idarenin; a) Adı :TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası b)…
TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası UIC-60 Makas İçin Kayma Yatağı Alımı Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler 1.1. İş sahibi idarenin; a) Adı :TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası b)…
TCDD စက်ရုံÇankırıကတ်ကြေးစက်ရုံကန်ထရိုက်အမိန့်အပိုဒ် 1 - စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် 1.1 ။ စီမံခန့်ခွဲမှု၏စီးပွားရေးပိုင်ရှင်၊ က) အမည် - TCDD စက်ရုံÇankırı Scissors Factory (ခ) လိပ်စာ - Abdulhalik …
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - UIC60 ကတ်ကြေးများအတွက် Hub နှင့် Heel Wedge ၀ ယ်ခြင်း
11: မတ်လ 14 30 @ - 17: 00
TCDD Plant Çankırı Scissor Factory UIC60 ကတ်ကြေးအတွက် Hub နှင့် Heel Wedge ၀ ယ်ခြင်းအပိုဒ် ၁ - စီးပွားရေးပိုင်ရှင်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက် ၁.၁ ။ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်ရှင်၊ က) အမည် - TCDD လုပ်ငန်းÇankırı Scissor …
TCDD Plant Çankırı Scissor စက်ရုံညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန UIC60 ကတ်ကြေးအတွက်လက်ခံသောဘာသာစကားနှင့်အမြီးအထူးရွေးချယ်မှုအပိုဒ် ၁ - စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်ရှင်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက် ၁.၁ ။ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်ရှင်၊ က) အမည် - TCDD လုပ်ငန်း…
TCDD စက်ရုံÇankırı Scissor Factory S-49 ဝမ်းချုပ်ခြင်းအတွက်ဝမ်းဗိုက်အထူးရွေးချယ်မှုလက်ခံရရှိအပိုဒ် ၁ - စီးပွားရေးပိုင်ရှင်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက် ၁.၁ ။ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်ရှင်၊ က) အမည် - TCDD လုပ်ငန်းÇankırıကတ်ကြေးစက်ရုံ…
ဘရိတ်စမ်းသပ်စနစ်နှင့် Bogie Frame Static နှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုစမ်းသပ်စနစ်စနစ် TC STATE RAILWAYS အထွေထွေညွှန်ကြားမှု (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ၁ ဘရိတ်စမ်းသပ်စနစ်နှင့် Bogie Chassis ၁ ...
တင်ဒါအသိပေးချက် - အမျိုးသားလျှပ်စစ်မီးရထားစီမံကိန်းစီမံကိန်းအင်ဂျင် bogie နှင့်နောက်တွဲယာဉ် bogie …
တင်ဒါအသိပေးချက် - National Train Set Project နောက်တွဲယာဉ်စီမံကိန်း Boji Chassis- အင်ဂျင် Boji Chassis-Cradle Beşik
တင်ဒါအသိပေးချက် - Monoblock body (ခရီးသည်တင်ကားအတွက်)၊ monoblock ဘီးကိုယ်ထည် (Y32 …)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Bogie Chassis ကိုအရံတိုင်လ်တာဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Ray ဘတ်စ်ကားကို Maintenance နှင့်ကို Hydro တည်ငြိမ်သောစနစ်များ၏ပြုပြင်ရေးအလုပ်
တင်ဒါအသိပေးချက် - National Electric Train Set Project အတွက် Motor Bogie နှင့် Trailer Bogie …
တင်ဒါအသိပေးချက် - National Electric Train Set Project Bogie Suspension Shock Absorbers၊ …
တင်ဒါအသိပေးချက် - National Electric Train Set Project အင်ဂျင် Bogie နှင့် Trailer Boji …
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: (bogie နှင့်ဘရိတ် မှလွဲ. ) လှေငြိမ်လှည်းပြည့်စုံ (TÜLOMSAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Y32 Bogie ဘရိတ် Disc ဝယ်ယူခံရဖို့ (TÜVASAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆိုပါဘရိတ် discs တွေကို (Bogie များအတွက် Y32) ပစ္စည်းဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜVASAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Y32 Bogie ဘရိတ် Disc ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအဘို့ (TÜVASAŞ)